Maria Mironova - ekahle kokuziphatha Pushkin. Indzaba-agumenti: incazelo, kuvetwa kwebalingisi kanye nokubuyekeza
"Masha Mironova - ekahle kokuziphatha Pushkin" - indaba, abafundi ngokwesiko ahlinzekwa ngo izifundo esikoleni ezincwadini Russian. Lesi sihloko kungase kubonakale kulula, kodwa lokho kumane nje efika kuqala. Heroine main kule noveli "Ndodakazi uKaputeni sika" - uhlamvu iyinkimbinkimbi laphawula, ngakho kudinga indlela ekhethekile, ngokuphambene, nezinye abadlali, njengoPetru Grinyov, Emelyan Pugachev noma Savelich, okuyinto asethwe ngumlobi ngokuningiliziwe, ngokucacile futhi umxhwele.
Kungenjalo, Pushkin wafika nokuboniswa Masha e Uyibheka sengathi umbhali uhlose engashiyi tiphawulo. Ngakho Girl laconic, ikakhulukazi esigabeni sokuqala ukubukeka kwaso, futhi ukhiqiza Grinyova umbono ladies yesifundazwe eduze. Izimo yokugcina yaba negalelo elikhulu ukuziphatha indodakazi likakaputeni, okuyinto ekuqaleni namahloni yemlandzi; Ngaphezu kwalokho, yena savalwa kakhulu futhi ingakhulumi ngokwemvelo, ukuthi ekuqaleni musa ukukhuluma hhayi umusa yayo.
Uhlamvu Masha Mironova
Kungani "Masha Mironova - ekahle kokuziphatha Pushkin" - indaba, okuyinto uhlelo e inqubo yemfundo esikoleni? Impendulo itholakala umlingisi Heroine, noma kunalokho, esiqiwini wamandla angokomoya ukumsiza ukuba zigcwale amanzi ngemva ukufa okubuhlungu abazali babo, ngenhlonipho ukusinda zidindilizile bukhona ngezilingo ungophule umakoti okusongela Isiphelo sakhe esibi - odingisiwe kanzima eSiberia. Kwakuphakathi izinhlekelele Masha wembula amandla agcwele umoya wakhe, futhi ibonisa i intando okungenakudanjiswa. Umthola amandla okumelana Shvabrin ngokwezwi nezwi blackmailing wakhe, aze asongela ngisho ezokhipha, lingenza ubuhlungu bokushonelwa ebuhlungu abathandekayo, ukukhulumela ngoba Grinyova, okuyinto emehlweni zonke, ngisho noyise imbala kwaba imbuka ngumkhapheli esimweni.
Image Masha Mironova
"Masha Mironova - ekahle kokuziphatha Pushkin" - indaba okuzothathwa ecacisiwe nezimfanelo ukuthi avunyelwe ukuba sisinde usizi ekugcineni ukuthola injabulo emshadweni ne othandekayo wakhe. izigcawu Key indaba Pushkin - scene nge iqhaza lakhe. Ikakhulukazi le osebenza Yiqiniso, umkhiqizo wokugcina, lapho UMariya uyabuza usizo kusukela kakhulu Umbusikazi uCatherine II ngomyeni wakhe. Mironov libonisa ngesikhathi esifanayo eziphikelelayo ukuze ushwele ungalinda ayisekho: cishe ngokushesha lapho ephindela ekhaya ngemva ingxoxo iNdlovukazi uMaria wathola izindaba wokukhulula Petra Grineva.
Masha Mironova ubuhlobo izindaba izinhlamvu
Okubhaliwe-indzaba "Masha Mironova - ekahle kokuziphatha Pushkin" kumelwe zibonise ukuthi, sibonga ngezimfanelo zakhe zokuziphatha Heroine uphatha ukumelana novivinyo olunzima kakhulu. Yingakho ibizwa Akumangalisi ngokushesha uthola iphuzu abavumelana ngalo abanye. ngokushesha Savelich enamathiselwe wakhe, futhi ngafunga ukuthi ukukhonza kwakhe indlela yayo; abazali Grinyova ulithathe njengomuntu bomdabu; Ubaba Gerasim nomkakhe Akulina Pamfilova, befaka ukuphila kwabo engozini ukuze awuvikele futhi ningathuli Pugachev. Masha ine khono elimangalisayo lokubiza ukuqiniseka abanye. Nanguya ngobuqotho ngakho futhi ezinhle, akekho kubo akaphiki wakhe uzwela kanye nosizo. "Masha Mironova - ekahle kokuziphatha Pushkin" (omude) - incazelo emfushane hhayi kuphela uhlamvu Heroine, kodwa ubudlelwano bakhe nabanye. Ngakho Pushkin ugcizelela izinga ntombazane ekhululekile kakhulu: ukwethembeka, ubuqotho kanye nokuvuleleka. Naphezu yokuntula imfundo, Masha kuyinto ebucayi kakhulu: isibonelo sakhe, ngokushesha wazizwa ukungathandi Shvabrin, futhi nakuba akakwazi ukuchaza ngokucacile Petru Grinevu isizathu isimo sakhe sengqondo maqondana nomkhwenyana umhlala, nokho umfundi uyaqonda kuyinkambo efanele, okuyinto kuqinisekiswa izenzakalo ezalandela.
Maria Mironova noPetru Grinyov
"Masha Mironova - ekahle kokuziphatha Pushkin" - indaba, lapho kufanele anikelwe hhayi kuphela kwebalingisi protagonist, kodwa futhi ubuhlobo bakhe Petrom Grinevym. Njengoba kushiwo ngenhla, i-intombazane ekuqaleni namahloni ngakho, kodwa Indlela yokuthi kamuva amabili, naphezu namaqhinga esikhohlisayo Shvabrin, ngokushesha okukhulu kutholakala ukuba nolimi olulodwa olwaziwayo. Ekuqaleni yemlandzi yamphatha i ukuchema kuzo esobala, kodwa kamuva e indodakazi likakaputeni wabona intombazane enhle zinengqondo futhi zizwakala. Bavame okuxhunywana, okubonisa ukufana izinhlamvu zabo. Eqinisweni, oluhlaza, kanye noMariya, ethembekile, evulekile, kuqondile, futhi lokhu ufanelwe inhlonipho ngisho Pugachev. Iqiniso ukuthi uPetro wayekhona kusukela ekuqaleni walandela isiqondiso 'aqaphele udumo ubungqabavu bobusha bakhe, "kusho ubaba wakhe; okufanayo kungathiwani Masha Mironova. UPetru akazange ibala udumo lwabo yizicukuthwane eqaphela pretender uMbusi uPetru III kulo futhi wahlala eqotho iNdlovukazi Ekaterina II, futhi Mironov ezimweni ezibucayi wahlala ethembekile nesoka lakhe.
Isithombe Masha Mironova Ukwakheka ekulandiseni
"Masha Mironova - ekahle kokuziphatha Pushkin" - uhlelo indzaba ibonisa isimo sendaba yomlobi, kusukela yokwakheka umkhiqizo kukusiza ukuba uqonde kangcono umlingisi Heroine. Sishilo kakade ukuthi Ingcenye eqakathekileko yomsebenzi wehlelo izigcawu ukhiye lihlotshaniswa umfanekiso waso. Umqondo lobudoda Heroine ligijima yonke senzo. Ngisho izigcawu lapho engekho, isithombe sakhe zihlobene izinhlamvu. Grinyova isifiso ukuvikela ilungelo indodakazi likakaputeni umenza duel nge Shvabrin ukuthi cishe lubekelwe ukuphila kwayo, umzamo amashushu ugcine intombazane uPetru etilongweni waphinda kuletha hero Pugachev, futhi ekugcineni, umlandzi uthola inkululeko sibonga intercession yayo lisebenza ka iNdlovukazi.
"Masha Mironova - ekahle kokuziphatha Pushkin" - indaba, mhlawumbe, enye yezinto ezinzima kakhulu ohlelweni lwezifundo zesikole, naphezu ivolumu elincane indaba Pushkin sika. Kodwa izimo yokugcina kuyiso sonke yinkimbinkimbi ukuloba kwakhe: eqinisweni umbhali wamazwi ambalwa mayelana uhlamvu wakhe, ngakho kufanele ukuba anake kakhulu umbhalo lelandzisako: kubalulekile ukuba zinamathele ngokoqobo wonke amazwi akha umbono walo. Indzaba-agumenti afundisa ngayo abafundi ukusebenza ulimi ofingqiwe Pushkin, okuyinto igama noma umusho wakwazi ukusho ekucabangayo yakhe.
Andrew Fedortsov: Biography, Filmography futhi ukuphila siqu umlingisi (esesithombeni)
Rudinshtein Mark: Biography, umsebenzi, amaqiniso kumnandi
Nastya Sambursky: Biography nomsebenzi actress
Cedar zikaphayini ngesikhathi sabo cottage ehlobo
Uyini iqashwe? Futhi kungani
Kanjani ukwenza manicure zinhlayiya ekhaya?
Utshwala salicylic ngokumelene induna. Izici isicelo
Kusho microwave futhi yasungulwa kanjani indlela?
ZaseCaucasia ihlathi ikati: isifinyezo
Ukudla lokushisa: izinzuzo main nokwehluka umkhiqizo uhla
Fennel. izakhiwo awusizo zamakha
Ukuqeqesha imibono sokuthuthukiswa emihle motor amakhono
Indlela yokwenza izinwele zehlengolozi ngezandla zomuntu siqu: isigaba samakhono. Indlela yokudwengula izinwele zedoli